Android 7.1.1 Nougat na-abịa Samsung J5 (2016) | Gam akporosis
Gam akporo 7.1.1 Nougat na-abịa Samsung J5 (2016)
Aaron Rivas | | Nkuzi, Gam akporo nsụgharị
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị nwere ihu ọma nwere igwe Samsung Samsung J5 (2016), yabụ kelee gị! Mmelite Android 7.1.1 na-abịa gaa na njedebe ndị a nke nta nke nta. Nke a bụ n'ihi mbọ ụlọ ọrụ South Korea Samsung na-eme iji melite ahụmịhe nke ndị ọrụ ya.
Cheta nke ahụ A tọhapụrụ Samsung J5 na afọ gara aga (2016) na, ruo mgbe ahụ, ha nwere ike na-enwe Android Marshmallow.
Maka ugbu a, mmelite ahụ erutela Poland, yabụ Anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ Samsung J5 na gam akporo Nougat arụnyere.
Nke a bụ ihe nkịtị, ebe ọ bụ na mgbasa na ntọhapụ nke sistemụ arụmọrụ, n'ọtụtụ ọnọdụ, a na-eme ya na usoro na mpaghara. Ya mere a ga-atụ anya na ụbọchị ma ọ bụ awa na-esote, anyị ga-enweta ozi ahụ A gam akporo N dị maka mba ndị ọzọ (Spain gụnyere) na Europe site na OTA.
Android N na-ekwe nkwa ahụmihe kacha mma na Samsung J5
Ọ bụrụ n’echiche na Samsung J5 gị na-arụ ọrụ nke ọma na Android Marshmallow, aga m agwa gị ihe: Ọ ga-arụ ọrụ ka mma na gam akporo Nougat! Nke a sistemụ ga-aka melite ahụmahụ nke iji Samsung J5 anyị.
Mmelite ahụ ga-egosipụta oyi akwa nhazi nke Ahụmahụ Samsung 8.1 na ọ dịghị ihe dị njọ. Nke a -enye anyị a ọzọ polished imewe na bụ obi ụtọ na-emetụ na anya karịa kpochapụwo Touchwiz. Na mgbakwunye, ọ na-ahapụ gị imetụ aka na Samsung stampụ nke ị na-agaghị echefu.
Anyị nwekwara ike ịchọpụta ọtụtụ ndị ọzọ mmeziwanye dị ka a njikwa batrị ka mma, ọ ga - ekwe omume na ọ ga - ewe ogologo oge iji mee ka ọrụ niile nke J5 anyị rụọ ọrụ ụbọchị niile.
Ọzọkwa, Android Nougat wetara anyị ụfọdụ mmelite na igwefoto na akụkụ ndị ọzọ n'ozuzu ọrụ nke ọnụ.
Android Nougat ga-abụ mmelite ikpeazụ nke sistemụ arụmọrụ nke Samsung J5 ga-enweta. Ma echegbula, ka anyị ghara ịkwa ụta, n'ihi na ugbu a, enwere J5 fọdụrụ nwa oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Gam akporo 7.1.1 Nougat na-abịa Samsung J5 (2016)
J5 nke 2016 agaghị emelite gam akporo 7
Na-emelite ugbua na Europe, maka Latin America ọ dịghị ihe a maara?
Mmelite ahụ kwesịrị iru Latin America n'ihi na ọ bụ maka J5 niile. Ọ bụ naanị na mmelite, n'ọtụtụ ọnọdụ, mpaghara na-ahapụ ya, ụfọdụ na-ebute ụzọ dị elu karịa ndị ọzọ, ọ dị mwute. Yabụ na ọ bụ naanị obere oge.
Zaghachi Aaron Rivas
November 6 na ọ dịghị ihe na Spain. Ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ m ikpe.
Ihe na-aga nwayọ karịa etu anyị tụrụ anya ya.
Buru n'uche na Samsung enyeghị ụbọchị ọ bụla maka mmelite maka mba ma ọ bụ mpaghara ọ bụla. Ya mere, anyị ga-echere ... Mkpịsị aka gafere na ọ na-abịa ọsọ ọsọ.
Ndewo ọma, anyị nọ na Nọvemba 6 ma ọ nweghị ihe ọ bụla ọzọ na Spain ma ọ bụ obere oge ị chere na ọ ga-abata?
Jụụ. Mmelite ahụ ga-abịa, ọ na-ewe ogologo oge karịa ka a tụrụ anya ya. Anyị ga-ama banyere ozi ọ bụla gbasara mmelite nke J5 (2016) iji gwa gị ebe a Androidsis.
Na-eche na Argentina. November agafeela ma ọ nweghị ihe ọ bụla
Ọ karịala otu ọnwa kemgbe OTA pụtachara, ma ọ bịarubeghi Spen. Nwelite a ọ ga-abụ ụgha?
Taa December 3 na anyị ka na-adịghị imelite ka 7.1.1 nougat kwesịrị rutere ọnwa gara aga
Zaghachi Carmen Arroyo Arroyo
Disemba 5 na ihe ọ bụla. Ihe kachasị njọ bụ na ọ bụghị n'ihi na Spain nọ na ala nke ndepụta ahụ, mana n'ihi na ọ bụ naanị Poland na India ka a tọhapụrụ ka ogologo oge gachara. Ọ dị ka a ga-asị na ha akwụsịla nkenye agha n'ihi ihe ụfọdụ.
Patetico Samsung dị ka mgbe niile. Ọ bụrụ na m ga-azụ ya ...
Huawei erewo ihe karịrị 100 nde ekwentị na 2017
Google Lens dị ebe a site na Foto Google